Fikarohana momba ny firaisana Fifandimbiasan'ny instrumental transcommunication (ITC), Feo mifono feo elektronika (EPP), horonam-peo, vatana vaovao, tontolon'ny tontolon'ny fanahy: Fahatakarana ny lanitra sy ny helo. Ny hasarobidin'ny fivavahana - Fikarohana momba ny fanambadiana gikanerana
Article by: Walter Semkiw, MD avy amin'ny Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana
Ankoatra ity lahatsoratra ity, handinihana ny famariparitana momba ny tanan'ny Fanahy Lehibe na ny Lanitra, dia alefaso any:
Ny Mediumship an'ny Leslie Flint sy ny Tatitra avy amin'ny Fanahy Rehetra
Famaritana momba ny fifandraisana an-tariby (ITC) sy ny horonan-tsary mifono feo elektronika
Ny Fifandraisana Instrumental dia voafaritra ho fifandraisana amin'ny fanahy amin'ny olombelona amin'ny alàlan'ny telefaona, mpilalao horonantsary, televiziona, ordinatera ary fitaovana elektronika hafa. Ity fifandraisana ity dia mety hampiditra sary hijerena ny fahitalavitra na mpanara-maso ny ordinatera, ary koa ny famindrana feo nalefa amin'ny kasety na fitaovana elektronika.
Ny Elektronika Voice Phenomenon dia manondro ny fisamborana feo avy amin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny kasety na fitaovana elektronika. Amin'izany, ny term Instrumental Transcommunication dia ahitana ny Phonomenon Electronic Voice. Araka ny voatanisa etsy ambany dia ny praiminisitra Konstantine Raudive no nantsoina hoe Phonomenon Voice Electronic Voice, ary ny feo henon'ny EPP dia antsoina hoe Raudive Voices.
Ohatra iray amin'ny Transmision Instrumental dia midika ny sarin'i Frederick Juergenson, nomena ny marina, izay resahina etsy ambany. Ho an'ny sary ITC eto amin'ity pejy ity dia apetraho eo amin'ny sary ireo kisary mba hanitarana azy ireo.
Fifandraisana ara-panahy: Mpitsabo namono iray avy any an-toeran-kafa
Te hanomboka ity fizarana ity miaraka amin'ny anecdote manokana aho. Tamin'ny volana aogositra 2007, nanatrika seminera iray tao amin'ny Tendrombohitra Shasta, Kalifornia, nokarakarain'ny Michael sy Raphaelle Tamura, manasongadina an'i Michael sy James Van Praagh. Michael Tamura dia mpilahatra avy amin'ny fahazazany ary nandany ny fiainany tamin'ny fampiofanana mpitaiza hafa. James Van Praagh dia fitaovana iray mifandray amin'ny olona efa nodimandry ary nanampy tamin'ny famoronana seho an-tserasera amerikana, The Ghost Whisperer.
Tamin'ity fanangonana ity, dia nihaona tamin'ny mpitsabo iray aho miaraka amin'ny diplaom-pitsaboana iray miasa ao amin'ny hopitalin'i New York amin'ny fanaraha-maso ny fitsaboana taratra ny mararin'ny homamiadana. Ity mpitsikera ity dia nizara tantara iray miaraka amiko.
Nolazainy fa namoy ny ainy ilay vehivavy akaiky azy tamin'ny mbola kely. Indray andro, roa herinandro taorian'ny fandevenana azy dia nihazakazaka ny telefaona ary namaly izany izy. Ny feo teo amin'ilay tsipika dia ny feon'ny namany namoy ny ainy.
Nolazainy taminy fa niantso azy izy mba hampahafantatra azy fa mahitsy izy ary manitsy ny fiainany vaovao amin'ny tontolo ara-panahy. Naharitra ora maro ny resadresaka. Samy nanao veloma ry zareo ary nifarana ny antso. Nilaza tamiko ilay mpitsabo fa azony antoka fa avy tamin'ilay namany maty ilay antso an-tariby. Ity fanambarana mivaivay avy amin'ny mpahay siansa iray ity dia nitarika ahy hianatra bebe kokoa momba izany trangan-javatra izany.
Tamin'ny volana desambra 2007, nanatrika lahateny nataon'i Mark Macy, mpiara-manoratra, miaraka amin'i Dr. Pat Kubis, Resadresaka ankoatry ny hazavana: Fifandraisana amin'ireo namana sy mpiara-miasa niainga tamin'ny alàlan'ny fomba elektronika.
Tao amin'ny famelabelaran-kevitr'i Marka dia nahafantatra momba ny fikarohana izay natao aho izay nampiasan'ny fanahy fanahy fitaovana toy ny audiotape, telefaona ary fahitalavitra mba hifandraisana amin'ireo olona ao anaty fiaramanidina ara-batana. Araka ny nomarihina, ity karazam-pifandraisana ity dia nantsoina hoe Instrumental Trans-Communication na ITC.
Fifandraisan-davitra ara-panahy: Ny renim-pianakaviana maty an'i Friedrich Juergenson dia miresaka aminy amin'ny alàlan'ny recorder tape
Iray amin'ireo mpikaroka tany am-boalohany tamin'ity sehatra ity ny mpamokatra sarimihetsika soedoà iray antsoina hoe Friedrich Juergenson, izay ny fialamboliny dia ny fandraketana ny hiran'ny vorona. Tamin'ny 1959, raha nilalao ny rakipeo nataony tamin'ny natiora izy dia taitra nandre ny feon'ny reniny izay nilaza hoe: “Friedrich, jerena ianao. Friedel, Friedel keliko, henonao ve aho? (1)
Friedel no anarana an-dalan'ny reniny niantso azy, izay tsy nisy nahafantatra izany. Fantatr'i Friedrich fa tsy nanoratra ny reniny tamin'io fampakaram-bady io mihitsy izy, ka nahatonga azy hino fa tena fifandraisana avy amin'ny tontolon'ny fanahy izany.
Ny Papa Paul VI dia manomboka fandaharanasa fikarohana momba ny fifandraisan-davitra any Vatican
Nahatonga tetikasam-pikarohana iray ho an'i Juergenson io toe-javatra io, izay nanoratra feo an-jatony maro avy eo. Tao amin'ny 1964 dia namoaka boky amin'ny teny soedoany izy Voices from the Universe, arahin'ny lohateny hafa Fifandraisana amin'ny Radio amin'ny maty.
Nanao fanadihadiana momba ny Papa Paul VI i Juergenson taorian'izay ary lasa mpinamana tamin'ny Papa izy, izay liana tamin'ny feon'ny fanahy voasambotra. Ny Papa Paul VI dia nanangana ny tetikasam-pikarohana fiasan'ny Instrumental Transcommunication tao Vatican.
Dr. Konstantine Raudive dia maheno avy amin'ny reniny efa namoy ny ainy sy ny vola mombamomba azy hoe "Fenom-peon-kira elektronika", na Raudive Voice
Tamin'ny 1967, an'i Juergelson's Fifandraisana amin'ny Radio amin'ny maty dia nadika tamin'ny teny alemanina ary Dr. Konstantine Raudive, psikology Latvian, dia namaky azy io ary lasa liana tamin'ny ITC. Raudive dia namorona ny metodolojiny manokana amin'ny alàlan'ny toetran'ny laboratoara. Tao amin'ny iray amin'ireo rakipeony, izy koa dia nandre ny feon'ny reniny efa maty tao amina fandefasana, izay nampiasa ny solon'anarana mahazatra azy hoe "Kostulit, io no reninao." (2)
Raudive dia nanamafy fa ny fanahy dia afaka manova ny feon'ny fotsy raki-peo, izay novokarina rehefa nisy mpandihy napetraka teo anelanelan'ny onjam-peo, mba hamoronana feo fampitaovana azo afindra amin'ny kasety. Raudive dia niantso ity Fehezam-peo Elektronic Voice (EVP) ity ary namoaka boky mitondra ny lohateny Fandrosoana: Fihetseham-po mahatalanjona amin'ny fifandraisana elektronika amin'ny maty.
Ny fitsapana eo ambanin'ny toetry ny laboratoara dia manamafy ny fisian'ireo feo raitra
Ny andrana nataon'i Raudive dia notsaboin'ny fiarahamonina siantifika sy ny orinasan-tsolika roa any Angletera, Pye Records, Ltd. ary Belling sy Lee, Ltd., nanomboka ny famerenana ireo andrana ireo tamin'ny toe-javatra voafehy. Na eo aza ny fanaraha-maso henjana, dia nisy feo paranormal no hita tamin'ireto andrana ireto.
Tamin'ny 1969, Raudive dia nizara loka loka voalohany avy amin'ny Fikambanana Suisse for Parapsychology ary ireo feo somary paranormal re tamina horonantsary dia nantsoina hoe "Feo Raudive" ho fanomezam-boninahitra azy.
Taorian'ny nahafatesan'i Konstantine Raudive, dia nifampiresaka tamin'ny mpiara-miasa aminy izy
Ny mahaliana indrindra dia satria rehefa maty ny mpikaroka ITC dia miampita amin'ny andaniny sy ankilany. Ao amin'ireo famindrana ireo, dia nanome fampahalalana momba ireo sehatra ara-panahy izy ireo.
Ao amin'ny sary etsy ambony sy eo ankavanana, ny sary iray dia omena an'i Dr. Raudive mamolavola sary avy amin'ny tontolon'ny fanahy ao amin'ny fahitalavitra. Ny fifandraisana hafa dia nofaritana tao amin'ny soratra. Ity sary sy famaritana ity dia novokarina avy Resadresaka ankoatry ny mazava: Fifandraisana amin'ireo namana sy mpiara-miasa niainga tamin'ny alàlan'ny fomba elektronika, nataon'i Macy sy Kubis.
Sary ara-panahy: Nivoaka tamin'ny fahitalavitra i Friedrich Juergenson nandritra ny fandevenana azy manokana
Friedrich Juergenson, maty tao amin'ny 1987 ilay olona nandre ny feon'ny reniny efa nodimandry tamin'ny feon-kira nataony tamin'ny hira vorona. Raha mbola velona izy dia namorona fifandraisana akaiky tamin'i Claude Thorlin, mpiara-mianatra amin'ny ITC.
Voalaza fa manan-talenta ara-tsaina i Juergenson ary tamin'ny andro nahafatesany dia voalaza fa nandefa hafatra an-telefaonina tany amin'i Thorlin izy ary naneho fa nandritra ny fotoam-pandevenana dia nanandrana naneho ny sariny tamin'ny fahitalavitra Thorlin izy. Noraisin'i Thorlin tamim-pahamatorana ilay hafatra telepathika ary tsy nankany amin'ny fandevenana ny namany izy fa nijanona tao an-trano ihany ary nanangana fakantsary haka sary ny fahitalaviany.
Raha ny marina, nandritra ny fandevenana an'i Juergenson, Thorlin dia naka sary ny sarin'ny vatan'ny angovo Juergenson tamin'ny fahitalaviany, izay hita ao amin'ny Resadresaka hafa ankoatry ny hazavana ary asongadina eo ankavanana. Miharihary ny fitoviana ara-batana eo amin'ny vatan'ny fanahin'i Juergenson sy ny vatany.
Sary mifandraika amin'ny Instrumental Transmissions dia manohana ny fisian'ny orinasa mpamokatra herinaratra izay mamorona endrika ivelany
In Resadresaka hafa ankoatry ny hazavana, misy sary hafa ahitana olona efa nodimandry koa omena, ny sasany amin'izy ireo dia nosoratana tamin'ny sarin'ireo solosaina finday. Asehon'ireny sary ireny fa manana vatana angovo isika ao amin'ny tontolon'ny fanahy izay misy endriny mitovy amin'ny vatantsika.
Ireo fandinihana ireo dia manome fahatokisana ny hevitra hoe manana vatana angovo isika na holograma izay modely ho an'ny vatantsika. Ity lanjan'ny angovo ity dia resahina ao amin'ny fizarana mitondra ny lohateny hoe: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano.
Mpitarika hafa mifandraika amin'ny fifandraisana izay nifampiresaka tamin'ny tontolo ara-panahy
Mamelà ahy hizaha ohatra vitsivitsy amin'ireo mpikaroka ITC izay afaka nifandray tamin'ny mpiara-miasa taminy taorian'ny fahafatesana.
Nahazo antso an-tariby avy amin'ny namana mpikaroka Konstantine Raudive i George Meek taorian'ny nahafatesan'i Raudive tao amin'ny 1974.
Jules sy Maggy Harsch-Fischbach dia nanangana ny Transcommunication Study Circle of Luxembourg (CETL), fikambanana iray natokana ho an'ny fikarohana ITC. Tamin'ny Febroary 4, 1993, nahita hafatra an-tsoratra tao amin'ny ordinaterany izy ireo avy amin'ny mpiara-miasa taminy, Ernst Mackes, izay maty tamin'ny Novambra 26, 1992.
Tamin'ny Martsa 4, 1993, nahita sary hafa an'i Ernst tao amin'ny solosainy izy ireo, toa nafindra avy amin'ny fiaramanidina ara-panahy. Nasehony fa toa i Ernst no nieritreritra ny tenany taloha, nipetraka teo amin'ny solosaina iray, nitafy ny jiro nomaniny teo amin'ny fiainana ary nipetraka teo ambanin'ny hazo rofia tany amin'ny sehatry ny tropika tany amin'ny tontolon'ny fanahy. Ity sary ity dia omena ny tsara.
Fanazavana avy amin'ny hafatra mifandraika amin'ny fifandraisana momba ny tontolo fanahy sy ny vatana vaovao
Hafatra maro no voaray avy amin'ny tontolon'ny fanahy avy amin'ireo mpikaroka ITC, izay voalaza ao Resadresaka hafa ankoatry ny hazavana. Ireo hafatra ireo dia manome hevitra momba ny fiainana, ny tontolon'ny fanahy sy ny vatana vaovao ao amin'ny vatana hafa. Hamintiko ny santionany amin'ireo hafatra ireo eto ambany:
Fahafatesana sy fanatrehana ny fandevenana ny tena
Mikasika ny fizotry ny fahafates dia aseho fa mijanona eo amin'ny manodidina ny vatantsika aorian'ny fahafatesantsika isika ary mijanona ho akaikin'ny olon-tiantsika isika, na dia ireo izay mahay mifehy ihany aza no hahita ny vatan'ny angovo an'ilay maty. Na dia tsy mahay mandanjalanja aza dia mety hahatsapa ny fisian'ilay olona maty ny havany.
Ny olona maty dia afaka manatrika ny fandevenana azy manokana ary mandre ny hira fiderana azy ireo. Ny fahatsapana aorian'ny fahafatesany dia fahatsapana fahazavana sy fahalalahana, toy ny hoe nesorina ny "akanjo fiarovan-tratra". (3)
Ian Stevenson, MD, avy ao amin'ny Oniversiten'i Virginie, dia namoaka zava-nitranga mahavariana momba ny vatana vaovao izay nahatonga ny olona iray izay nisaintsaina ny fitsangatsanganana Buddhist nandritra ny androm-piainany, dia nitatitra fa nahatsiaro nandritra ny fahafatesany, ny fandevenana sy ny fahaterahana indray. Mba hamerenana ity tranga ity dia mandehana any: Trangam-panjakan'izao tontolo izao ao Nai Leng | Choakhun Raisuthajarn (Choate)
Aorian'ny fandefasana ny vatantsika, dia miaina ao amin'ny vatana etera isika, vatana angovo izay manenika ny vatana. Ny vatana eterika atsy aoriana dia misavorovoro, izay mamela antsika hivoatra amin'ny planeta ara-panahy na ny ambaran'ny tontolo ara-panahy izay ananantsika vatana angovo hafa. Ny fehezanteny iray ampiasaina hamaritana an'io endrika io dia vatana astral, izay misy eo amin'ny planeta astral an'ny tontolo ara-panahy.
Amin'ny fiatrehana ny fiaramanidina astral, dia mety ho resin-tory ny sasany ary mifoha amin'ny fiaramanidina astral tsy mahafantatra ny fomba nahatongavany tany. Ny hafa dia mety mahatsiaro saina mandritra ny tetezamita. Mety hifoha amin'ny toeram-pitsaboana ny olona. Ireo olon-tiany sy ireo biby fiompy izay maty taloha dia mety hiandry ny olona vao maty. Ity trangan-javatra ity dia nitatitra tao amin'ny: Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i James Leininger
Fanitsiana ny tontolon'ny fanahy manaraka ny fahafatesana
Any amin'ny hopitaly na ny toerana fanasitranana hafa, ny fanovana vaovao vao maty amin'ny tontolon'ny fanahy. Ireo izay manana ampahan-tongotra eo amin'ny tontolon'ny ara-batana dia mahazo tari-dalana momba ny fomba hamerenany ny tongony amin'ny endriny amin'ny alalan'ny eritreritra.
Ho lasa tanora kokoa ny olona maty tamin'ny taon-dasa, ary hihalehibe ireo maty an-taonany, mandra-pahatongan'ny taom-piadanana iray, izay matetika no hita 25-30 taona. Rehefa miala ao amin'ny hopitaly dia mahita ny manodidina ny tany tahaka ny tany izy, fa mihetsiketsika kokoa.
Haavo na planina eo amin'ny tontolon'ny fanahy: lanitra sy afobe
Ny tontolon'ny fanahy ao amin'ny tontolon'ny fanahy, mifototra amin'ny zava-niainan'ireo mpirotsaka an-tsokosoko Echo Bodine sy Judy Goodman, ary koa ny lahatsoratra avy amin'i Ahtun Re, izay nampitain'i Kevin Ryerson, Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana.
Ny drafitra amin'ny tontolon'ny fanahy dia nofaritana tamin'ny alalan'ny fifandraisana ITC, izay mifandray amin'ny hoe aorian'ny fahafatesana dia ny ankamaroan'ny olona dia mandeha mankany amin'ny fiaramanidina avaratra ambany sy ambany sy ambony. Ny fiaramanidina avaratra ambany dia manintona ireo olona mifantoka amin'ny fahavelomana, izay ambany noho ny fivoaran'ny evolisiona.
Ny fisiana any amin'ny helo
Tao amin'ny lahateniny, Mark Macy dia namariparitra ny haavon'ny astral ambany ho "fiaramanidina maloto", mitovy amin'ny eritreretinay ny hanaovana purgatory na helo. Voalaza fa mpangalatra madinidinika, mpangarom-paosy, mpanitsakitsa-bady, mpandainga ary mpandraharaha sandoka no mivondrona eto. Ny mpamono olona dia tsikaritra ho mifamono, izay manjary sosotra satria tsy misy zavatra azo vonoina amin'ny sehatra ara-panahy.
Ny olona sy ny vondrom-piarahamonina dia mety hianjera amin'ny ambaratonga ambany amin'ny tontolon'ny fanahy
Voafaritra ao amin'ny fifandraisana ITC fa mety ho voafina an-tsitrapo ny fiarahamonina amin'ny fotoana. Ohatra, ireo olona ao amin'ny tanàna misy Vazivozona na ny tanànan'ny Viking fahiny dia afaka mampaharitra ny fisiany. Ny fampandrosoana indray ny vatana vaovao sy ny fivoarana bebe kokoa dia mety ho taraiky, raha misafidy ny fanahy.
Raha manemotra ny fivoarany ara-panahy ny fanahy iray, rehefa tonga nofo izy ireo dia tsy mivoatra toy ny fanahy hafa, izay mitantara ny fahasamihafan'ny fivoaran'ny evolisiona eto an-tany. Izany dia manazava ny antony mahatonga ny olona sasany eo amin'ny zanak'olombelona afaka manao heloka bevava mahatsiravina, izay mety tsy ho takatry ny hafa. Ireo olon-dratsy ireo dia nisafidy ny hanemotra ny fivoarany, na dia tsy avelan'izy ireo hijanona mandritra ny fotoana tsy voafetra aza ny karma.
Ny olona etetika sy ny evolisiona dia mandeha any amin'ny planeta afovoan-tany, izay ahitana toerana tsara tarehy, trano mahafinaritra, tanàna, efitrano fampisehoana, sekoly sy oniversite. Ny olona dia afaka mifangaro amin'ny vondrom-piarahamonina mifototra amin'ny fivavahana, kolontsaina, vondrona foko, hazakazaka na toe-javatra hafa izay manondro azy.
Na dia misy aza ny karazana fanavotana an-tsitrapo ao amin'ny planeta afovoan-tany, dia mitombo tsikelikely ny fomba fijerin'ny ankamaroan'ny olona, ​​ary tsy maintsy tontosaina amin'ny fidirana ao amin'ny planeta avo kokoa, izay maneho ny hevitra ara-pivavahana ao an-danitra.
Ireo olona manana ny maha-izy azy, toy ny mpanakanto, ny mozika, ny mpahay siansa ary ny filozofa, dia mankafy ny tontolo astral, satria afaka mikatsaka ny tombontsoany izy ireo, toy ny nataon'izy ireo teto an-tany, saingy tsy ilaina ny hanangana fiainana hivelomana. Rehefa miverina indray ny olona toy izany, dia afaka maneho ny heviny amin'ny fiaramanidina izy ireo avy eo.
Ny mpikaroka ITC izay maty dia manoritsoritra toerana iray ao amin'ny fiaramanidina astral izay ahitan'izy ireo, any amin'ny tontolon'ny fanahy, amin'ny fampivelarana fomba hifandraisana amin'ny mpikaroka ITC eto an-tany amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika.
Fiainana ao amin'ny tontolon'ny fanahy: milalao golf sy mihinana sakafo syntetika
Ireo izay mankafy fialam-boly, toy ny filalaovan'ny gulf, dia afaka mamerina indray ny fialany amin'ny ankapobeny araka izay tiany, na dia ny fanahiana aza indraindray dia mampihetsi-po toy ny milalao golf ary avy eo mikatsaka fandrosoana bebe kokoa. Ao amin'ny fiaramanidina astral, ny sakafo synthetic dia azo atao, anisan'izany ny hena, na dia tsy nisy biby novonoina aza mba hamoronana sakafo. Ahtun Re, ilay torolalan'ny fanahy voatonona etsy ambony, dia nanondro koa fa ny sakafo ankafizin'ny olona dia afaka mamorona amin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny alalan'ny fahatsiarovana avy amin'ny fiainana eto an-tany.
Ny lanitra: Ireo haavon'ny planeta ambony na planeta
Ny hafatra ITC dia manondro fa misy fiaramanidina avo kokoa, antsoina hoe planeta ara-tsaina, izay loharanon'ny fandrosoana ara-teknika sy ara-kanto. Ireo zavatra hita ireo dia nalefa telefaonina tamin'ny fiaramanidina Tany ho an'ireo afaka mahazo hevitra. Izany no mahatonga ireo fikarohana vaovao eto an-tany matetika arahin'ny olona samihafa any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ny olona tsirairay eto an-tany dia afaka mahazo ireo télécharger telepathique amin'ny alàlan'ny nofy na fisainana.
Na ireo fiaramanidina avo kokoa, izay antsoina hoe planeta selestialy, dia fantatra, izay akaiky kokoa an'Andriamanitra. Izany no ahitana ny fanahy izay fantatra hoe Mpitarika ambony sy mpampianatra ara-panahy. Ireo izay any amin'ny planeta afovoany dia mahafantatra ny fiaramanidina selestialy, na dia tsy mahatsapa izany aza ny ambaratonga avo indrindra amin'ny tontolon'ny fanahy.
Fivoarana ara-panahy, Ecstasy Lucid & Ankamaroan'ny tranon'ny Ray
Ahtun Re, mpitari-dalana ny fanahy, na dia i Kevin Ryerson aza, izay miresaka momba ahy, anisan'izany ny lohahevitra toy ny evolisiona fanahy sy ny planeta tontolo ara-panahy, dia mamorona ny bokiko, Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, milaza fa misy eo amin'ny fiaramanidina akaiky an'Andriamanitra izy. Nofaritany ho toy ny “fifaliana tanteraka” ny fahatsiarovany an'ity fiaramanidina avo indrindra ity. Ity no haavo farany any an-danitra.
Ny foto-kevitra momba ny ambaratonga maro na fiaramanidina misy eo amin'ny tontolon'ny fanahy dia azo ampiasaina mba hahatakarana ilay fanambarana nataon'i Jesosy hoe: "Ao an-tranon'ny Raiko misy fitoerana maro."
Ny haavon'ny sehatra ara-panahy na ny planeta dia miankina amin'ny herim-panahy ara-panahy eto an-tany
Afaka mandeha any amin'ny fiaramanidina ara-panahy voafaritra izay mifototra amin'ny fivoarantsika isika. Amin'ny ankapobeny, tsy misy hafa isika rehefa maty. Ireo izay tsy dia mivoatra dia lasa mankany amin'ny fiarahamonina misy olona marobe tsy voavolavola, fa ireo izay niasa tamin'ny fivoarany ara-panahy teto an-tany dia hivory eny amin'ny fiaramanidina ambony.
Ny tombam-bidy sy ny tanjon'ny fivavaham-pinoana amin'ny fahazoana porofo momba ny fanambadiana
Ny fivavahana dia nanolo-tena hameno ny fahalalany ny amin'izay mety hitranga aorian'ny fahafatesana sy ny toetry ny tontolo ara-panahy. Ny torolalana ara-pitondran-tena omen'ny mpaminanin'ny fivavahana dia nanampy ny olona hitondra tena amin'ny fomba izay hitarika azy ireo hiakatra amin'ny ambaratonga ambony amin'ny tontolo ara-panahy, amin'ny ambaratonga antsoina hoe lanitra. Amin'izany fomba izany, ny fivavahana dia nanao tanjona lehibe ary nampionona ny zanak'olombelona.
Nipoitra ny olana sy ny ady rehefa nisara-bazana ny olona ny fivavahana ary ny famantarana mafonja amin'ny fivavahana manokana dia nahatonga fifandonana sy herisetra teo amin'ny olona samy hafa finoana. Ny herisetra fotsiny dia manosika olona hitarika ny olona any amin'ny planeta ambany kokoa amin'ny tontolo ara-panahy.
Hanohy ny fivavahany rehefa manome ny fiarahamonina sy ny fanohanana iraisana izy ireo. Porofon'ny natiora indray ao amin'ny vatana vaovao, izay mampiseho Afaka manova ny finoana avy amin'ny fiainana iray manontolo isika, dia hanampy amin'ny fanesorana ny fizarazarana ary hahatonga antsika hahatakatra fa fanahy manerantany isika. Amin'izay dia ho takatsika fa tena fianakaviana iray isika ary afaka mampiasa loharanom-bola hananganana tontolo iray tiantsika hiverina.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha & hitazonana ny maha-izy azy ny tsirairay
Any amin'ny tontolon'ny fanahy dia tsarovana ny fiainam-piainana rehetra taloha ary mety hitady namana avy amin'ny fiainana andavanandro isika.
Friedrich Juergenson, tamin'ny fifandraisana amin'ny solosaina tamin'ny 1992, dia nilaza hoe: "Ny olona dia mitazona ny maha-izy azy manokana mandritra ny 'fiovan'ny zava-misy' miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena sy ny vatana vaovao." (4) Ity fanambarana ity dia taratry ny fandinihana natao tao xenoglossy virosy vovoka, izay toetra tsy misy dikany ao amin'ny fanahy.
Taty aoriana dia nitatitra avy tao amin'ny fiaramanidina astral i Juergenson tamin'ny taona 1993 fa "ny eritreritra rehetra dia tsy misy afa-tsy telepathy." (5) Ity fanambarana ity dia manondro ny fahafahan'ny fanahy ao amin'ny tontolon'ny fanahy mifandray an-telefaona, tsy mila mampiasa kabary.
Isika dia mitondra ny fiainana amin'ny fiainana any amin'ny tontolon'ny fanahy
Friedrich Juergenson dia nampita ihany koa, mikasika ny tontolon'ny fanahy, "Raha tsy namaha ny olanao teto ambonin'ny tany ianao dia hiandry anao eto izy ireo. Amin'ity zava-misy vaovao ity dia tsy zava-dehibe ireo lohateny sy toerana notanananao teto ambonin'ny tany. Ny sisa tavela dia ny fanahinao. Ny tena zava-dehibe eto dia ny fahatsapanao etika sy ny maha-olombelona, ​​ny zavatra rehetra voajanahary manangana. " (6)
Ny fifandraisana ITC dia manondro fa ny olona tsirairay dia mitondra ny olana eo aminy rehefa maty izy ireo. Voalaza fa ny tany no toerana tsara indrindra hamahana olana. Ny tontolo astral dia nofaritana ho toerana iray ahafahanao manonona sy miasa amin'ny hevitra ara-tsaina. Eto an-tany, miatrika ny fihetsikao sy ny vokatry ny hetsika ianao: mandinika izay tena inoanao. (7)
Ny fanambaràna indray ao amin'ny vatana vaovao sy ny tontolon'ny fanahy: Ny fiainana an-tany dia porofon'ny Pudding
Miorina amin'ny fifandraisana ITC avy amin'ny fiaramanidina astral, Kubis sy Macy dia tonga tamin'ny fehin-kevitra manaraka. "Ny tiana holazaina dia ny hoe afaka mamorona rafitra ara-tsaina maro sy milalao hevitra amin'ny eritreritra astral. Fa ny tena fiainana eto an-tany dia mametraka ny hevitry ny olona ho fanao mahatsikaiky. Ny fiainana no fitsapana asidra amin'ny zavatra tena inoana. " (8)
Fialan-tsasatra sy Travel World Spirit
Ny olona dia afaka mitety saina amin'ny lafiny hafa na planeta hafa, na afaka mampiasa directigibles, baolina mafana na fiaramanidina mafana, fiaramanidina mandeha amin'ny fiara elektrôla na moto, miankina amin'ny fomba tiany hivezivezy. (9)
Ny fahalianan'i Thomas Edison amin'ny Spiritualism, ny Telefaona Fanahy na ny Box Box ary ny Instrumental Transcommunication-Elon Musk ho an'i Edison Reincarnated
Any amin'ny faran'ny Resadresaka hafa ankoatry ny hazavana, dia nanipika fa i Thomas Edison, izay nanamboatra ny jirony tamin'ny zavatra maro hafa, dia nanao ezaka lehibe mba hamoronana fitaovana elektronika izay azo ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny fanahy maty, izay antsoina hoe bitsika fanahy na boaty fanahy. Amin'ny teny hafa, i Thomas Edison dia nirotsaka nanamboatra fitaovan'ny Instrumental Transcommunication.
Ny tombotsoam-piainana, dia nahitana ny fampodiana amin'izao fotoana izao ny Thomas Edison. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any amin'ny:
Mark Macy sy Dr. Kubis dia mamarana ny bokiny miaraka amin'ny torolàlana momba ny fomba ahafahan'ny olona manao fanandramana ITC. Raha te hahita ny lahatsarin'ny ITC, henoy ny firaketana ny ITC ary mianatra bebe kokoa momba ny ITC, mandehana any amin'ny tranonkala: www.worlditc.org
Jereo ny horonantsary fanadihadiana nataon'i Daniel Drasin momba ny Fampitana ny Fampitaovana mitondra ny lohateny hoe:
1. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa
Elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana momba ny fiainana an-dava, Boulder, CO USA, 1995, p. 102
2. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana lalim-piainana, Boulder, CO USA, 1995 p. 106
3. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana fikarohana lalina, Boulder, CO USA, 1995, p. 65
4. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana fikarohana lalina, Boulder, CO USA, 1995, p. 53
5. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana fikarohana lalina, Boulder, CO USA, 1995, p. 9
6. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana fikarohana lalina, Boulder, CO USA, 1995, p. 59
7. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana fikarohana lalina, Boulder, CO USA, 1995, p. 18
8. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana fikarohana lalina, Boulder, CO USA, 1995, p. 52
9. Pat Kubis sy Mark Macy, fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fahazavana: miaraka amin'ireo namana sy namana mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, Griffin Publishing / Fikarohana fikarohana lalina, Boulder, CO USA, 1995, p. 55